Ezinye Izinganekwane Zokusoka Ongase Uzikholelwe: Inhlanzeko kanye Nezifo Ezithathelwana Ngocansi
por I-Blogdepsychology | -Nov 3, 2021 | abanye | 0 Amazwana
Kuningi okusatshalaliswayo mayelana nokuthi ukusoka kuyingcono kangakanani impilo yomuntu wesilisa. Kodwa ingabe kunjalo ngempela?
Lena ingxenye yesi-2 yochungechunge lwethu lwezinganekwane zokusoka.
QAPHELA: Umbhali oholayo nguLillian Dell'Aquila Cannon
Inganekwane: Kumele usoka ingane yakho ngoba kunzima kakhulu ukugcina isitho somntwana sihlanzekile.
Ukuhlola iqiniso: Ezinganeni, ijwabu lihlanganiswa nekhanda lomthondo. Awukwazi futhi akufanele ukuhlehlise ukuze uyihlanze, ngoba lokhu kuzobangela ingane yakho ubuhlungu futhi kufana nokuzama ukuhlanza ingaphakathi lesitho sangasese sentombazane. Ijwabu lengane lenziwe ngendlela efanele ukuze livikele ikhanda lomthondo futhi livimbele ukungena kwendle. Okufanele ukwenze ukuhlanza ingaphandle lomthondo njengomunwe.
Inganekwane: Abafana abancane abahlanzi ngaphansi kwejwabu futhi bathola izifo.
Ukuhlola okungokoqobo: ijwabu liyahlukana futhi lihlehla ngokwalo phakathi kweminyaka emi-3 nokuthomba. Ngaphambi kokuba ihlehle yodwa, sula ingaphandle njengomunwe. Uma isizihoxisa yodwa, iyazihlanza ngenkathi ingane igeza noma igeza. Lapho umfana ethola lesi sici esisha esithakazelisayo senduku yakhe, uvame ukuhoxisa ijwabu ngokwakhe lapho egeza noma eshawa, futhi ungamkhuthaza ukuba alihlanze. Kodwa akufanele usebenzise insipho njengoba iphazamisa ibhalansi yemvelo futhi iyacasula kakhulu. Akukho okukhethekile okwenziwa abazali. Abafana abaningi abasebancane abanankinga nhlobo yokudlala ngezitho zabo eshaweni noma kwenye indawo! Kwakunzima kakhulu ukufundisa abafana bami ukugeza izinwele kunokunakekela izitho zabo. (Camille 2002)
Inganekwane: Imithondo engasokiwe inesmegma esinukayo.
Ukuhlola iqiniso: Eqinisweni, i-smegma ikhiqizwa izitho zangasese zabo bobabili abesifazane nabesilisa phakathi neminyaka yabo yokubeletha. I-Smegma yenziwe nge-sebum namaseli esikhumba futhi igcoba ijwabu ne-glans emadodeni, kanye ne-clitoral hood kanye ne-labia yangaphakathi kwabesifazane. Iyawasha ngesikhathi sokugeza okuvamile futhi ayibangeli umdlavuza noma ezinye izinkinga zempilo.
Inganekwane: “Umalume wayengasokile waqhubeka nokuba nezifo futhi kwadingeka asokwe njengomuntu omdala. «
Ukuhlola okungokoqobo: iseluleko sezokwelapha kungenzeka sivune ukutheleleka kwabesilisa abangasokile. Isibalo esishaqisayo sodokotela abaqapheli ukukhula okujwayelekile kwejwabu, sitshela abazali (ngokungeyikho) ukuthi bahoxise ijwabu lomntwana futhi baligeze kuzo zonke izinguquko zenabukeni. Ukwenza lokhu kudabula ijwabu kanye nezicubu (ezibizwa nge-synechiae) ezixhuma ekhanda lomthondo, okuholela ekubeni nezibazi kanye nezifo.
Ukwaziswa okungelona iqiniso kwanda kakhulu ngeminyaka yawo-1950 no-1960, lapho iningi lezingane lalisokwa futhi sasingazi kangako ngokunakekela umthondo uphelele, yingakho indaba ihlale imayelana nomalume womuntu. 'KUZE. Ukwenza lokhu kumfana kungafana nokuzama ukuhlanza ingaphakathi lesitho sangasese sentombazane ngamaswabhu kakotini ngemva kokushintshwa kwenabukeni. Kunokuba ivimbele izinkinga, imikhuba enjalo ingadala izinkinga ngokuletha amagciwane ayingozi. Khumbula, abantu bavela ezilwaneni, ngakho ayikho ingxenye yomzimba eyayidinga ukunakekelwa okukhethekile eyayiyosinda ezingcindezini zokuziphendukela kwemvelo. Izitho zangasese zomuntu zizihlanza ngendlela emangalisayo futhi azidingi ukunakekelwa okukhethekile.
Inganekwane: Indodana yami kwatholakala ukuthi ine-phimosis futhi ngenxa yalokho kwadingeka isokwe.
Ukuhlola okungokoqobo: I-Phimosis isho ukuthi ijwabu alihlehli. Njengoba ijwabu labafana ngokwemvelo alikwazi ukuhoxiswa, akunakwenzeka ukuxilonga i-phimosis kumfana. Ukuxilonga okunjalo kwezinsana kusekelwe olwazini olunganembile futhi ngokuvamile kwenziwa ukuze kuqinisekiswe ukutholakala komshwalense wokusokwa ezifundazweni lapho ukusokwa kwezinsana okujwayelekile kungasakhaviwe.
Ngisho namanye amadoda amadala anejwabu alihlehli kodwa uma nje lingakuphazamisi ukuya ocansini kulungile ngoba ukuchama yikho okuhlanza ijwabu ngaphakathi.
I-Phimosis futhi ingelashwa ngokunakekelwa ngokhilimu we-steroid kanye nokuqiniswa okuthambile okwenziwe ngumuntu, uma kudingekile, noma okubi nakakhulu, ngokuqhekeka kwejwabu, kunokusokwa okuphelele. (Ashfield 2003) Lezi zinqumo zokwelashwa zingenziwa futhi kufanele zenziwe abantu abadala.
Inganekwane: Abafana abangasokile banama-urinary tract infections (UTIs).
Ukuhlola iqiniso: Lesi simangalo sisekelwe ocwaningweni olwahlola amarekhodi ezingane ezizalelwe esibhedlela (Wiswell 1985). Lolu cwaningo lube nezinkinga eziningi, okuhlanganisa neqiniso lokuthi aluzange lubale ngokunembile ukuthi izingane zisokile noma cha, uma zizalwa ngaphambi kwesikhathi futhi ngenxa yalokho zingenwa kalula izifo ngokuvamile, uma zinceliswa ibele (ukuncelisa ibele kuvikela izifo zomgudu womchamo) futhi uma ijwabu lakhe lalikhishwe ngenkani (okungangenisa amagciwane ayingozi futhi kubangele i-UTI) (Pisacane 1990). Kusukela lapho, kube nocwaningo oluningi olukhombisa ukuncipha kwe-UTI ngokusoka noma ukwanda kwe-UTI ngemuva kokusoka. Ngakho-ke, ukusoka akunconywa ukuvimbela izifo ze-urinary tract (Thompson 1990). Amantombazane anamazinga aphezulu e-UTI kunabafana, kanti nokho uma intombazane ine-UTI, imane inikezwe ama-antibiotics. Ukwelashwa okufanayo kusebenza ezinganeni.
Inganekwane: ukusoka kuvikela i-HIV/AIDS.
Ukuhlola okwangempela: Ucwaningo oluthathu olwenziwa e-Afrika eminyakeni embalwa edlule olwathi ukusoka kuvikela i-AIDS nokuthi ukusoka kwakusebenza njengomuthi wokugoma owawusebenza ngo-60% (Auvert 2005, 2006). Lezi zifundo zazinamaphutha amaningi, okuhlanganisa neqiniso lokuthi zamiswa ngaphambi kokuba kwaziwe imiphumela egcwele. Kuphinde kube nocwaningo oluningi olukhombisa ukuthi ukusoka akuyivimbi i-HIV (Connolly 2008). Izingqinamba eziningi zisengozini ekusakazekeni kwezifo ezithathelwana ngocansi, okwenza kube nzima ukukhiqiza imiphumela isuka kwesinye isibalo iye kwesinye.
E-Afrika, lapho kuye kwenziwa ucwaningo lwamuva nje, ukudluliselwa kwe-HIV kwenzeka ngokuyinhloko ngobuhlobo bobulili phakathi kwabesilisa nabesifazane, kodwa e-United States isakazwa ngokuyinhloko ngokuchayeka kwegazi (njengokwabelana ngezinaliti) nangobudlelwane bobulili phakathi kwamadoda. Ukusokwa kwabesilisa akubavikeli abesifazane ku-HIV noma amadoda aya ocansini namadoda (Wawer 2009, Jameson 2009).
Okubi nakakhulu, ngenxa yokusatshalaliswa kwezifundo zase-Afrika, abesilisa base-Afrika sebeqala ukukholelwa ukuthi uma besokwa akumele basebenzise amakhondomu, okuzokwandisa ukusabalala kwe-HIV (Westercamp 2010). Ngisho nasocwaningweni olunemiphumela emihle kakhulu yokusoka, umphumela wokuvikela wawungama-60% kuphela; abesilisa kusafanele basebenzise amakhondomu ukuze bazivikele bona kanye nabalingani babo ku-HIV.
E-United States, ngesikhathi sobhubhane lwe-AIDS ngawo-1980 kanye nawo-1990, cishe amaphesenti angama-85 amadoda amadala ayesokiwe (amazinga okusoka aphezulu kakhulu kunase-Afrika), kodwa i-HIV yayisasakazeka.
Kubalulekile futhi ukuqonda ukuthi abesilisa ocwaningweni lwase-Afrika kwakungabantu abadala futhi bevolontiya ekusokeni. Izingane ezisokiwe zazingenayo enye indlela ngaphandle kokuzinqumela.
Inganekwane: Ukusoka kuyafaneleka ngoba kungasindisa izimpilo.
Ukuhlola Okungokoqobo: Cabanga Ngomdlavuza Webele - Kunamathuba angu-12% okuthi owesifazane athole umdlavuza webele ekuphileni kwakhe. Ukukhipha izinkinobho zamabele ngesikhathi sokuzalwa kungakuvimbela lokhu, nokho akekho ongamela ukwenza lokhu enganeni. Kusabhekwa njengokushaqisayo lapho owesifazane osekhulile ekhetha ukwenza i-prophylactic mastectomy ngoba ephethe isakhi sofuzo somdlavuza webele, kodwa kwakuyisinqumo somuntu siqu esisekelwe engozini eyandayo yomdlavuza. Ingozi yokuphila konke yokuthola i-HIV ingaphansi kwama-2% kwabesilisa futhi ingancishiswa ibe cishe ku-0% ngokusebenzisa ikhondomu (Hall 2008). Ngakho-ke singakumela kanjani ukusokwa kwe-prophylactic ezinganeni zabafana?
Izeluleko ezisebenzayo zabesilisa abathintekayo ekusokeni
Ukulimala kwengqondo ngenxa yokusoka
Ukusoka Okuchemile Ngokwesiko Nokungavumelani Nesayensi: Ochwepheshe
Izimiso zokuziphatha kanye nezomnotho zokusoka
Ukusoka: amaqiniso ezenhlalo, ezocansi kanye nezengqondo
Izinganekwane Ngokusoka Cishe Ucabanga Ngazo